Friday 17th of September 2021 / 12:26:07 AM
सम्भोगपछि भाले माकुराल
खबरअनुसार चीनका एक दम्पती बिहे गरेको ४ वर्षसम्म सन्तान नहुँदा एकदमै चिन्तित थिए । उनीहरू
कुनै शुभकार्यका लागि ब्रत बसेका महिलाले ब्रत तोडेको रात सहवास गर्न हुन्छ कि हुँ दैन धर्मशास्त्र र चिकित्साशास्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ फरक-फरक दिइएको छ।हिन्दू धर्मशास्त्रमा मन भगवानमा मात्र लगाउन गरिने उपवासका बेला भोजन र यौन दुबै सोच्नै नहुने
यस्तै छ कम्बोडियाको सुन्दा आश्चर्य लाग्ने खालको परम्परा जहाँ छोरीलाई आफ्नो जीवनसाथी रोज्न एक भन्दा बढी पुरुषसंगका यौन सम्बन्ध राख्न
राती सेक्स किन नगर्ने, बिहान किन गर्ने ? जान्नुहोस पुरा कुरा
अधिकांश मानिसहरुको यौनसम्पर्कको समय भनेको राती हुने गर्दछ । रातमा सवै कुरा मिल्ने भएकाले सवैले रातको समय रुचाउँछन । यौन सम्पर्क गर्ने महतवपूर्ण समय भनेको अधिकांशका लागि रातको एकान्त समय नै हो ।
हरेक प्राणीमा यौनेच्छाको चाहना हुनु शास्वत
बीबीसीको एक कार्यक्रम क्रसिंग कन्टिनेन्टले यस विषयमा शोध गरेको थियो । त्यसक्रममा यौन सम्बन्ध कायम गर्नका लागि के&nd
यौनका लागि महिलाहरु किन खोज्छन् भाडाका पुरुष ?
महिला यौनकर्मीबारे त हामीले कतै न कतै सुन्दै आएका छौं । तर, अहिले संसारमा पुरुष यौनकर्मीहरु पनि बढेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । धनाढ्य परिवारका महिला सदस्यहरुले यौन प्यास मेटाउनका लागि पुरुष यौनकर्मीको सेवा लिने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी
समाज विकशित हुँदै गएको भएपनि यौनका विषयमा धेरै भ्रान्ति तथा अन्धविश्वासहरु अद्यापि रहेका छ
हामिले सहजै बुझेको कुरा पनि हो महिलाहरुको अंग पुरुषहरुको भन्दा बेग्लै हुन्छ । तर पुरुषहरुका लागि कौतुहल्ताको बिषय भनेको महिलाको शरीरमा कुन अंग कति संवेदनशील होला भन्ने हो । अब भने यो बिषयमा धेरै सोचिरहनु पर्दैन । निक्कै लामो अनुसन्धानपछि शोधकर्ताह
महिलाहरू जीवनमा केही न केही फरक खालको सेक्स अनुभव गर्न चाहने एक अध्ययनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो–अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता–कस्ता कुरा
पुरुषहरु सँधै सोचिरहन्छन् महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग कुन् ? अधिकाँश पुरुषको आँखा पर्ने अंगहरु बाहेक अन्य अंगहरु पनि यौनिकरुपमा निक्कै संवेदनशील मानिन्छन् ।कतिपय अंगमा पुरुषको आँखा परि हाल्छ भने कतिपय अंगमा भने छोएपछि यौनिक उत्तेजना बढ्ने हुन्छ
किन हुन्छ यौनप्रति मानिसको आकर्षण ? कसरी बन्छ आनन्दको स्रोत यौन क्रिडा ?
पूर्वीय दर्शनशास्त्रमा महर्षी वात्स्यायनको नाम सायद कमैलाई थाह छ । अथवा जिज्ञासा राख्ने जोकोहीलाई थाह हुन सक्छ । विश्वमै महर्षी वात्स्यायन नै यस्ता व्यक्ति हुन् जसले मानिसको मात्र हैन प्राणिहरुमै रहेको यौनिकतालाई वैज्ञानिक ढंगले व्याख्या गरे ।
यदि तपाइँ बेलुकीको खाना धेरै ढिला खाने गर्नु
कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ?
कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ ।
महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको
तर एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्र
सम्भोग सुरु गर्नु अघि यौ